तारा एयरद्वारा लुक्ला सफाई अभियान
२०७३ असोज १९ बुधबार, काठमाडौं। सगरमाथा पोल्यूशन कन्ट्रोल कमिटी (एसपीसीसी)सँगको सहकार्यमा तारा एयरले सोमवारदेखि सगरमाथा क्षेत्रमा फोहर ब्यवस्थापना कार्यक्रम शुरु गरेको छ। तारा एयरले आफ्नो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिविलिटी (ब्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व) अन्तर्गत यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। एसपीसीसीले बार्षिकरुपमा करिव १२ टन फोहर संकलन गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, हाल एसपीसीसीले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गतका चौरिखर्क, नाम्च ... बाँकी अंश»
एनसेलले ल्यायो डे डेटा प्याक अफर
२०७३ असोज १९ बुधबार, काठमाडौं। देशकै अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चाडपर्वको उपलक्ष्यमा आफ्ना ग्राहकका लागि अझ सुलभ दरमा ईन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्न सकिने डे डेटा प्याक ल्याएको छ । यस अन्र्तगत ग्राहकले अब बिहान ५ बजे देखि साँझ ५ बजे सम्मको समयमा कर बाहेक १३ पैसा प्रति एमबि सम्ममा डेटा सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यो योजना यही बुधबार (असोज १९, २०७३) बाट लागु हुनेछ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार १०० एमबिको दैनिक, ५०० एमबिको साप्ताहिक अथवा २००० एमबिको मासिक ... बाँकी अंश»
मेरो दशैं - दश हजार जति दक्षिणा पाइन्छ
२०७३ असोज १८ मंगलबार, काठमाडौं। हरेक व्यक्तिका दशैंका अनुभव अलग अलग छन्। विभिन्न वर्ग र समुदायका मानिसले आआफ्नो ठाउँ अनुसार चलन अनुसार यो साँस्कृतिक पर्वलाई मनाउँदै आएका छन् । बैङकर तथा एनएमबी बैंकका मिडिया पब्लिक रिलेसन तथा ब्राण्डीङ अफिसर रमन झाले आफ्नो दशैको बारेमा हाम्राकुरा डटकमसँग यसरी कुरा साँटेका छन्। प्रश्नः दशैं कहाँ मनाउँदै हुनुहुन्छ ? जवाफः दशैं म नेपालमै मनाउने गरिएको छ । अहिलेसम्म विदेश गएको छैन । दशैं नेपालमा नै रमाईलो हुन्छ भन्ने मलाई लागे ... बाँकी अंश»
मेरो दशैं - हरेक दशैंमा नयाँ लुगा किन्छु : प्रल्हाद कार्की
२०७३ असोज १८ मंगलबार, काठमाडौं। नेपाल दशैंमय भएको छ। शिक्षण संस्थाहरुमा त झन घटस्थापनादेखि नै विदा भइसकेको छ। दशैं बिदा भएपछि आफ्नो पुर्ख्यौली घरमा पुग्ने बिद्यार्थीहरुले नै गाउँघरमा पहिलो चरणको दशैं भित्र्याउँछन्। त्यसपछि शुरु हुन्छ गाउँघरमा दशैको रौनक । शहर बजारमा पनि पहिलो चरणको दशैं यिनै विद्यार्थीले ल्याउँछन्। घटस्थापनापछि दशैका लागि विद्यार्थीलाई छुट्टी दिएपनि कलेजको कामपछि दशैपनि यतै मनाउने सुरमा काठमाडौंमा रहेका कान्तिपुर सिटी कलेज पुतलीसडकका प्रवन्ध ... बाँकी अंश»
मेरो दशैं - सेलरोटी खाएर दशैं मनाउँछु : सुदिप आचार्य
२०७३ असोज १७ सोमबार, काठमाडौं। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं हरेक नेपालीको घरघरमा खुसी लिएर आएको छ। खुसी व्यक्ति अनुसार हुने गर्छ। कसैलाई दशैंमा खानपिनमा रमाउँदाखुसी हुन्छ। सबैलाई खेल्न मनपर्छ। मांसाहारीलाई दशैं भन्ने वित्तिकै मासुकै याद आउँछ। शाहाकारीको दशैं सात्विक हुनेगर्छ। नेपालीहरुले सांस्कृतिक रुपमा सदियौंदेखि मनाउँदै आएको दशैंको उल्लास भने सबै तह र तप्कामा छ। यहि उल्लासको बीचमा हाम्राकुरा डटकमले समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग दशैंको बारे ... बाँकी अंश»
मेरो दशैं - मासु नखाएरै वित्छ : सुमन पोखरेल
२०७३ असोज १७ सोमबार, काठमाडौं। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं मध्य हुने क्रममा छ। दशैंको तयारी घरघरमा छ। हिन्दूधर्मालम्बीहरूमा दशैंको उल्लास छ। यहि उल्लासको बीचमा हाम्राकुरा डटकमले समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुसँग दशैं कसरी मनाउनुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेको छ। मेरो दशैं शिर्षकमा गररिएका ५ प्रश्नमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग रमाइला कुराकानी भएको छ। नेपालकै नम्वर एक रेमिट्यान्स कम्पनी आईएमईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोख्रेलले आफ्नो दशैको बा ... बाँकी अंश»
उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट औद्योगिक व्यवसाय ऐनको स्वागत, के भने मुरारकाले ?
२०७३ असोज १६ आइतबार, काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संसद्ले गत बिहीबार पारित गरेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको स्वागत गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । महासङ्घले पत्ररका सम्मेलन गरी ऐनलाई निजी क्षेत्रले मुलुकको आद्योगिकीकरणको प्रस्थान बिन्दुका रुपमा लिएको जनाएको छ । ‘सुदृढ औद्योगिक सम्बन्धलाई उत्पादकत्व वृद्धिको मुख्य आधार मान्दै काम नगरेको दिनको ज्याला दिनुनपर्ने प्रावधान ऐनमा समेटिनुलाई हामीले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिए ... बाँकी अंश»
निजी क्षेत्रको सहभागितामा बन्द उद्योग सञ्चालन गरिने
२०७३ असोज १६ आइतबार, काठमाडौँ । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले हाल बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा पुनः सञ्चालन गरिने बताएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि आफूले गरेका कार्य र उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिन आइतबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री जोशीले बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने अभियानको थालनी नेपाल औषधि लिमिटेडबाट सुरु भइसकेको बताए । आफू मन्त्री भएपछि सदनबाट सर्वसम्मतरुपले औद्योगिक व्यवसाय ऐन र व ... बाँकी अंश»
कमल थापालाई दशैंले भ्याइ नभ्याई !
२०७३ असोज १६ आइतबार, सिन्धुली । हिन्दु नेपालीहरुको महान चाड विजयादशमी नजिकिँदै गर्दा सिन्धुलीका हाट–बजारमा मालसामान किन्नेको घुइँचो लाग्नुको साथै व्यापारीको आम्दानीमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । विगत एक वर्ष देखि खसी पालन गर्दै आएका सिन्धुली स्वल्पाठानाका कमल थापा दशैँ लागेसँगै आफ्नो आम्दानी वृद्धि भएको बताउँछन् । २०७२ कात्तिक देखि दुई लाख बढी लगानी गरेर करिब ५० भन्दा माथीको संख्यामा शुरुगरेको खसी पालन व्यवसायबाट हाल सबै विक्रि गरिसक्दा करिब पाँच ... बाँकी अंश»
२०७३ असोज १६ आइतबार, खजुरा (बाँके)। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तहीन सिमेन्ट उत्पादन गरेको आरोपमा जिल्लाका बागेश्वरी र जय मङ्गलम सिमेन्ट उद्योगका इजाजतपत्र निलम्बन गरेको छ । विभागले उद्योगले उत्पादन गरी बजारमा पठाएको सिमेन्टको नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा फरक भएकाले ती उद्योगका सिमेन्ट बिक्री–वितरणमा रोक लगाएको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार बोर्ड बैठकले उद्योगले उपभोक्तालाई गुणस ... बाँकी अंश»
निर्माण व्यवसायी संघ पाँचथरको अध्यक्षमा नेम्बाङ
२०७३ असोज १५ शनिबार, पाँचथर। निर्माण व्यवसायी संघ पाँचथरको दशौं अधिवेशनले बीरेन्द्र नेम्बाङलाई अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चयन गरेको छ । शनिबार सम्पन्न अधिवेशनको वन्द शत्रले नेम्बाङको अध्यक्षतामा २१ सदस्य नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो । समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा वल थापा, द्धितिय उपाध्यक्षमा राजेन्द्र प्रसाद रिजाल र त्रितिय उपाध्यक्षमा शशीराज आङदेम्बे निर्बाचित भएका छन् । त्यस्तै महासचिवमा सूर्य प्रकाश बाँस्कोटा, नीतिगत उपमहासचिवमा दीपेन योक्पाङदेन, आन्तरिक ... बाँकी अंश»
साताको नेप्से : चार अर्ब भन्दा बढीको कारोबार
२०७३ असोज १५ शनिबार, काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता कुल १५८ कम्पनीको रु चार अर्ब ४५ करोड तीन लाख २८ हजार मूल्य बराबरको ५२ लाख ९२ हजार १६० कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जकाअनुसार गतसाता १५२ कम्पनीको रु पाँच अर्ब ६५ करोड ४६ लाख ५८ हजार बराबरका ७२ लाख ३९ हजार ७५० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका थिए । कारोबार रकम गत साताको भन्दा २१.२७ प्रतिशत कम रहेको स्टकले जनाएको छ । साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा २२.७४ अङ्कले बढेर अन्तिम दिन एक हजा ... बाँकी अंश»
एचएफएनले सुरु गर्‍यो कृषि, उर्जा र पर्यटन विकासका लागि मासिक पत्रिका
२०७३ असोज १५ शनिबार, काठमाडौँ । चार वर्षदेखि हस्पिटालिटी कन्सल्टेन्सी सम्बन्धी तालिम तथा अन्य विभिन्न कार्य गर्दै आइरहेको हस्पिटालिटी फाउण्डेशन अफ नेपालले आफ्नो चौथौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा कृषि, उर्जा र पर्यटन विकासका लागि भन्दै नेशनल अपलिफ्टमेन्ट मासिक नामक मासिक पत्रिकाको शुभारम्भ गरेको छ । काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच उक्त पत्रिकाको शुभारम्भ गरिएको हो । पत्रिकाको विमोचन कृषि विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले गरेका थिए । देशमा कृषि, उर्जा तथा पर्यटन क्ष ... बाँकी अंश»
भिरकोमा महोत्सव हुने
२०७३ असोज १५ शनिबार, स्याङ्जा । नेपालकै कान्छो उद्योग वाणिज्य संघ भिरकोटमा पहिलो महोत्सव हुने भएको छ । भिरको उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार विजयदशमी तथा शुभ दिपावलीको अवसर पारेर आयोजना गरिएको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गरेको हो । पौष १ गते देखि १० गते सम्म संचालन हुने महोत्सवले भिरकोट नगरपालिकालाई देश तथा अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्म चिनाउने उदेश्य राखिएको छ । भिरकोट महोत्सवको आधार, कृषि पर्यटनको पुर्वाधार भन्ने नारा सहित आयो ... बाँकी अंश»
रिलायबल बैंक ग्लोबल आइएमईमा गाभिदै
२०७३ असोज १४ शुक्रबार, काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैंकले रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्विजिसन (गाभ्ने) गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । शुक्रबार भएको समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल र रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकका तर्फबाट अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल ले हस्ताक्षर गरे। दुवै बैंकविच एक्विजिसन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहि ३ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले जारी गरेको विज्ञाप्तीमा जनाइएको छ । र ... बाँकी अंश»
निर्माण ब्यवसायि विना समृद्ध मुलक बन्न असम्भव : अध्यक्ष गौचन
२०७३ असोज १४ शुक्रबार, पाँचथर। नेपाल निर्माण ब्यवसायि महासंघका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनले मुलक अव आर्थिक क्रान्ति तर्फ होमिने वेला आएको वताएका छन् । पाँचथरको फिदिममा शुक्रबार संघको दशौ साधारण सभा तथा अधिवेशनलाई सम्वोधन गर्दे उनले अव आर्थिक क्रान्तिले मात्रै मुलक समृद्द बन्ने उल्लेख गरे । आर्थिक क्रान्तिका लागि अव सरकारले निर्माण ब्यवसायिलाई साथै लिएर अघि नवढेसम्म आर्थिक क्रान्ति सम्भव नहुने गौचनको भनाई छ । आर्थिक राजनितीक दलका नेताहरुको खोक्रो आश्वसानले मात ... बाँकी अंश»
शनिबार विश्वकफी दिवस मनाइँदै
२०७३ असोज १४ शुक्रबार, काठमाण्डौ । विश्शभरी नै अक्टोबर १ लार्इ विश्वभरी अन्तर्राष्ट्रिय कफी दिवसको रूपमा मनाइने गरिएको छ । नेपालमा पनि शनिबार अन्तराष्टिय कफी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । नेपालमा दिवसको पुर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले कफी सम्बन्धी विषयवस्तुहरूमा केन्द्रीत रही हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । कफी उत्पादन गर्ने प्रमुख ५ मुलुकहरू ब्राजिल, भियतनाम, इथियोपिया, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाको नाम रहेको समु ... बाँकी अंश»